Mayelana NATHI - Beijing Convista Flow Control Equipment Co., Ltd
I-CONVISTA izinikele ekucwaningeni nasekuhlinzekeni zonke izinhlobo zemishini yokulawula ukugeleza efana ne- Ama-Valve, i-Value actuation & Izilawuli, Amapompo nezinye izingxenye ezihlobene nezinto zokwakha ezifana Flanges & nokufaka, Izihlungi nezihlungi, Amalunga, Amamitha Okugeleza, Ama-Skids, Ekubunjweni & UKWAKHA izinto njll.
I-CONVISTA ingumhlinzeki ohola phambili wamazwe omhlaba we Amaphayiphu, Valve actuation & Izilawuli, Amaphampu nezinto ezihlobene nalezi zindawo ezilandelayo zohlelo lokusebenza
Uketshezi olunolaka noluyiziqhumane
Amanzi ahlanzekile noma angcolile
Uketshezi olonakalisayo nolubonakalayo
Izingxube ezinamanzi / eziqinile namasilayidi
I-CONVISTA isekela izinhloso ze-Kyoto Protocol futhi ibeka inani elikhulu ekusebenzeni kahle kwamandla kuyo yonke imikhiqizo nobuchwepheshe. Ngaphezu kwalokho, izinqubo zethu zomsebenzi nendawo yokusebenza zenzelwe ukudinga amandla amancane kanye nezinto ezimbalwa zokusetshenziswa ngangokunokwenzeka.
Ukuze ube ngumhlinzeki onokwethenjelwa kakhulu wemishini yokulawula ukuhamba kwabasebenzisi bomhlaba jikelele
Isazi sesixazululo esiphephile, esonga amandla futhi esinobungani emvelweni
Hlala njalo kumakhasimende anelisayo ngensizakalo eqotho, eqinile, efanelekile futhi esebenza kahle
Hlala njalo ekucwaningweni kwamabhuku okuqinile kwabahlinzeki, ngenhloso yokubambisana kwamasu nokuhlangana ngokuwina
Phikelela njalo ekuhlakuleleni iqembu elinethalente ngentshiseko, inselelo nangothando
Isisebenzi siyisisekelo nomgogodla wethu. I-Convista incike kwisisebenzi sethu-laba bantu benza inani le-Convista, baphishekele ukuphepha kokusebenza komkhiqizo nokwethembeka, nokuziphatha okuhle, ubuqotho, kanye nokuhlonipha inani lomuntu ngamunye, usuku nosuku. Isisebenzi yitshe eliza kuConvista, ngasikhathi sinye, uConvista naye uzinikele ekwenzeni ngayinye yalezi mpumelelo ngazinye. Ukutshalwa kwezimali kweConvista kubuchwepheshe bamuva, inqubo kanye namathuluzi okuphatha kwenza umuntu ngamunye adlale amathalente akhe ngokunwebeka ngokuphelele.
Umsebenzi Wezokuphepha, Umsebenzi Onempilo
IConvista ikhathele ukuqinisekisa ukuthi indawo yomsebenzi iphephile futhi inempilo. Siqhubeka sithuthukisa unyaka nonyaka kulesi sici. Sibeka phambili ukuphepha kwabasebenzi enhlanganweni yethu, sisebenza ngokubambisana nabasebenzi endaweni ephephile nenempilo, sibheka ukuphepha nempilo emsebenzini wethu ngamunye, ngokuya ngalokho, sisebenza ngokuqhubekayo futhi siqinisekisa ukuthi siyaqonda futhi sinomthwalo wokuphatha izingozi.
Sisungula futhi sithuthukise uhlelo lokuphatha oluphephile nolwezempilo, indawo enhle yokuvikela ukuphepha, imishini kanye nokuhlolwa njalo kwezempilo konke kuqinisekise indawo yokusebenza indawo ephephile neyabasebenzi. IConvista isungule uhlelo lokuphathwa kwezempilo nokuphepha emsebenzini, uhlelo lokuphathwa kwemvelo, kuhlose ukuhlinzeka umsebenzi wethu indawo yokusebenza ephephile.
Ukuqeqeshwa Kwabasebenzi Nentuthuko Ukukhuthaza Nokuxhasa Abasebenzi Ukumba Amandla Akho
Sihlala sizibophezela ukunikela ngokugcwele kumathalente futhi sisebenzise konke okuhle kakhulu. Senza uhlelo ngalunye lomsebenzi oluthile lokuthuthukiswa komsebenzi ngokuya ngesimo sabo. Sinikeza ukuqeqeshwa ngamakhono kubasebenzi abasebenza phambili, futhi sihlinzeka ngoqeqesho lokuphatha kubaphathi, sinikeze ngeziqu ze-master degree kubasebenzi bezobuchwepheshe njll. Konke lokhu kusiza abasebenzi ngamunye ukukhula okuphelele ngesikhathi esifushane.
Abasebenzi Babonwa Futhi Banconywa
Unyaka ngamunye sihlola ikhono lomsebenzi elihamba phambili futhi nesisebenzi esiphambili sendima ephambili njengochwepheshe, futhi sinikeze
ibhonasi kuye ngamunye wabo njalo ngenyanga nonyaka ngamunye. Ngaphezu, siphinde silinganise ikhwalithi esezingeni eliphakeme yomuntu ngamunye futhi
okokusebenza kugcina umuntu ngamunye futhi kubanikeze ibhonasi.
Isiqubulo sethu esithuthukayo ukuqala kwamabhizinisi ndawonye, ​​sabelane ngezithelo.
Sicabanga ukuthi, uConvista ufana nomndeni kunenhlangano, isisebenzi sethu singamalungu omndeni, sisebenza ngenani elifanayo nenhloso yebhizinisi. Hlangana nenani labasebenzi, inani leqembu lenhlangano futhi wakhe igumbi elithuthuka kakhulu nelokukhuthaza isisebenzi. Isisebenzi esimi nenkampani futhi sabelana ngezithelo zokuqala.
Unyaka nonyaka uConvista ugubha uMkhosi Wentwasahlobo, ukubonga umnikelo ngamunye welungu.